विवरण: यो साँप को वृद्धि लड्न। खेल Spinjitzu Snakedown मा! यो Hypnobrai एक गाउँ हमला गर्दै छन्। छनौट कोले, जे, काई वा Zane Ninjago देखि: Spinjitzu को मास्टर्स र केही गम्भीर Serpentine पुच्छर बर्खास्त! निन्जा-गो!
खेल्नु: 1,788,857 ट्याग: कार्टून खेल, कार्टून, ninja, निन्जा खेलहरू, samurai, samurai games, ninjago, ninjago खेल